निखिल उप्रेतीले गरे श्रीमतीसँग मँहगो डिभोर्स: दिए भक्तपुरको घर र ५० लाख - TajaKhabarTV
खुसिको खबर ! क्रिकईन्फो अवार्डमा एसोसिएट बलरको मनोनयनमा सन्दीप लामिछाने
किङ कोहलीलाई पछि पार्दै पाकिस्तानका रिजवानले जिते आईसीसी ‘टी-२० क्रिकेटर अफ दि इअर’को अवार्ड
यी हुन् आईपीएलको अक्सनमा दर्ता भएका १५ नेपाली क्रिकेटर, सबैको बिक्ने संम्भावना न्युन
आईपीएलको सबैभन्दा महँगा खेलाडी केएल राहुल
२०७८, १५ मंसिर बुधबार २२:२० December 1, 2021 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौँ : अभिनेता निखिल उप्रेतीले जेठी श्रीमती कोपिला उप्रेतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । निखिलले कोपिलालाई छाडेको लगभग १३ वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन् । उनको र कोपिलाको भक्तपुर जिल्ला अदालतमा भदौ १ गते सम्बन्ध विच्छेद भएको हो ।
सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिएको भोलिपल्ट नै अदालतले दुवैको मञ्जुरीमा सम्बन्ध विच्छेद गराइदिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश उमेश कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसमा दुवै पक्षले मिलापत्र गरी पाउँ भनी दिएको संयुक्त दरखास्त र
सोही दरखास्त बमोजिम लेखिएको मिलापत्रको का’गजी व्यहोरा समेत दुवै पक्षलाई बाची सुनाइ सोको मतलब र परिणाम समेत सम्झाउँदा बुझाउँदा समेत लेखिए बमोजिम सुनाइ सोको मतलब सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मुद्दा मिलापत्र गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर भई दुवै पक्षले सही क्षापसमेत गरेकोले प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी दे’वानी कार्यसंहिता २०७४ को दफा १९३ (४) बमोजिम मिलापत्र प्रमाणित गरिएको छ ।’
अदालतको यो व्य’हारोले दुवै पक्षबाहिर नै लेनदेनमा सहमत भई अदालतसमक्ष गएको देखिन्छ । निखिलले अभिनेत्री सञ्र्चिता लुइँटेलसँग सन् २००८ मा दोस्रो विवाह गरेका थिए । उनीहरुको भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् फ्रेब्रुअरी १४ मा निखिलको घर सर्लाहीबाट नै विवाह भएको थियो ।
सञ्चिताको पनि माइती घर सर्लाही नै हो । कोपिलासँग भने निखिलले सं’घर्षका दिनमा नै विवाह गरेका थिए । भक्तपुर जिल्लामा मेलमिलापमा सकिएको मु’द्दामा ले’नदेनको विषय भने उल्लेख भएको छैन । खाली दुवै पक्षले सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको उल्लेख छ ।
तर, स्रोतका अनुसार निखिलले कोपिलालाई भक्तपुरको घर छाडिदिएका छन् । यो बाहेक निखिलले ५० लाख नगद र महिनाको ५० हजार दिनुपर्ने सर्तमा सहमति भएको स्रोतले बतायो । निखिलको कोपिलातर्फबाट एक छोरा छन् भने सञ्चितातर्फ एक छोरा र छोरी छन् ।
२०७८, ६ माघ बिहीबार २१:३५
पल र समिक्षाबीच फेरि लफडाः यथार्थ खुलाइदिने समिक्षाको चेतावनी (भिडियो हेर्नुस्)
२०७८, ४ माघ मंगलवार १२:३९
बिस्तारै मुकुण्डो खुल्नेछ भन्दै गायिका समीक्षा अधिकारीको यस्तो कडा चेतावनी ( भिडियो हेर्नुस )
२०७८, ४ माघ मंगलवार १२:३५
आमालाई जितको ट्रफी दिने जेनिष उप्रेतीको सपना अधुरै ( भिडियो हेर्नुस )
२०७८, ९ माघ आईतवार २१:५४
२०७८, ९ माघ आईतवार २१:४२
२०७८, ९ माघ आईतवार २१:३९
२०७८, ९ माघ आईतवार १३:०४
आईपीएल अक्सनमा १५ नेपाली खेलाडी, बिक्रि होलान् सन्दीप लामिछाने ?
२०७८, ८ माघ शनिबार १३:०३